Laptọọpụ site na processor: AMD ma ọ bụ Intel? - Laptọọpụ dị ọnụ ala
Ma ị bụ onye na-akwado Intel, ma ọ bụ onye na-akwado AMD, ị ga-enwe mmasị ịchọta yaNgwaahịa kachasị mma dịka onye nrụpụta si dị kedu ihe na-amasị gị karịa. Na mgbakwunye, SKU bụ ihe ọzọ dị oke mkpa, inwe ike ịhọrọ ụdị nhazi nke dabara mkpa arụmọrụ gị.
Ịhọrọ otu egwuregwu adịghị mfe, ma ọ bụrụ na ị maralarị ihe ndabere nke ịmalite, ihe niile ga-adị mfe karị. Ya bụ, na edemede ndị a, ị ga-enwe ike iji naanị otu ndị ahụ na mgbawa ị na-achọ, iji mee ya. nyocha dị nso n'etiti nhọrọ ndị na-amasị gị.
The Intel Core i3 processor bụ mgbawa ezubere na ọkwa ntinye, ya bụ, ndị ọrụ na-adịghị mkpa kọmputa maka isi ihe eji eme ihe, ndị na-adịghị achọ ọtụtụ ihe onwunwe. Dịka ọmụmaatụ, ha nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma maka ihe nchọgharị ịntanetị, mgbasa ozi mgbasa ozi, ngwa ụlọ ọrụ, na ọbụna maka ụfọdụ egwuregwu vidiyo dị mfe.
N'aka nke ọzọ, Core i3 nwere obere cores na-arụ ọrụ, ya mere oriri gị ga-adị ala nye ụmụnne ya ndị tọrọ ya. Yabụ, na ọnụ ahịa nke inye obere arụmọrụ yana myirịta, ha ga-eme ka batrị kọmputa gị dị ogologo.
Hụ kọmpụta i3 niile
Ọ bụ nso nke processors isi nke Intel, ya bụ, ndị a kara aka na ọtụtụ ndị ọrụ. N'okwu a, ha nwere ike ijikwa ọrụ niile nke i3, mana ha ga-arụ ọrụ niile ngwa ngwa. Ị nwere ike ịme egwuregwu vidiyo AAA yana ndezi vidiyo, mmemme, wdg.
Ha na-enye nguzozi n'etiti arụmọrụ na oriri mara ezigbo mma. Ọ bụ ezie na oriri ha dị elu karịa i3, ha nwere obere cores na-arụ ọrụ karịa i7, n'ihi ya, ha nwere ike ime batrị ahụ awa ikpeazụ site na ịpịnye ha nke ọma.
Hụ kọmpụta i5 niile
Intel Core i7 bụ ndị nhazi nke elu arụmọrụ, maka ndị ọrụ chọrọ mgbakwunye, dị ka ndị ọkachamara ma ọ bụ ndị na-egwu egwuregwu na-achọ uru kachasị elu maka ịrụ ọrụ multitasking na nguzozi ibu. Dị mma maka ngwa dị ka mkpokọta, ihichapụ, imewe 3D, ma ọ bụ egwuregwu vidiyo.
Mgbe na-arụ ọrụ na elu frequencies na inwe cores na-arụ ọrụ karịa, ndị a processors ga-enweta elu ike oriri, ya mere nnwere onwe ga-dịtụ emetụta. N'agbanyeghị nke ahụ, arụmọrụ nke ibe ugbu a na ike nke batrị lithium ga-enye gị ohere ịrụ ọrụ ruo ọtụtụ awa na-enweghị chaja na-enweghị nsogbu.
Hụ kọmpụta i7 niile
Usoro Intel Core i9 bụ nke HEDT (Desktop dị elu), Ma ọ bụ n'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ibe kacha elu na-arụ ọrụ ị nwere ike ịchọta. Ha nwere ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke cores iji melite nhazi nhazi, ya mere ọ nwere ike ịbụ ezigbo echiche maka ọrụ ndị ahụ ebe a na-achọ ịrụ ọrụ dị elu.
Dị ka ọmụmaatụ, ha nwere ike ịbụ ezigbo nhọrọ na virtualization na otutu mebere igwe na-agba ọsọ n'out oge, maka nnukwu nchịkọta koodu isi mmalite software, nsụgharị, wdg. Ọ bụ ezie na, na ụgwọ ọrụ ahụ niile, ha ga-abụ ndị nwere okpomọkụ na oriri kachasị elu, nke na-ebelata mmegharị ...
Hụ kọmpụta i9 niile
Ọ bụ akụkụ mbụ nke AMD. Ndị na-arụ ọrụ Ryzen 5 na-enye a zuru oke itule n'ihe gbasara ike ike na arụmọrụ. Ya mere, ha bụ nhọrọ kachasị mma maka ọtụtụ ndị ọrụ. Site na ha ị nwere ike ịgagharị na ịntanetị ngwa ngwa, lelee ọdịnaya mgbasa ozi, nkwanye, mee ngwa ụlọ ọrụ, kpọọ egwuregwu vidiyo, wdg.
A na-eji ọnụ ụlọ nrụpụta dị elu wuo ndị nrụpụta a, na-enye ha ohere iji wepụta ọmarịcha arụmọrụ ahụ TDP dị ala na oriri. Ya mere, nnwere onwe na ndị nhazi ndị a ga-adị mma nke ukwuu.
Hụ laptọọpụ niile nwere Ryzen 5
AMD Ryzen 7 bụ onye nrụpụta nke arụmọrụ dị elu nke ụlọ ọrụ a. Njirimara ya ga-enye gị ohere ịnweta arụmọrụ kacha mma na laptọọpụ. Inwe ike ịrụ ọrụ dị iche iche, site na nke kachasị mkpa, inwe ike ịrụ ọtụtụ n'otu oge na-enweghị ọdịda arụmọrụ, gaa na ndị ọzọ dị arọ dị ka egwuregwu vidiyo, ndezi, imezigharị, wdg.
Oriri ya dị elu karịa Ryzen 5, ebe ọ nwere ọnụ ọgụgụ ndị ọzọ nke cores akụ na-achọ ike. Ya mere, batrị kwesịrị ịdịru ntakịrị. Otú ọ dị, ekele maka ịrụ ọrụ nke ngwaọrụ ọhụrụ ndị a, na mmejuputa batrị dị elu, ị nwere ike ịrụ ọrụ ogologo ụbọchị na-enweghị chaja.
Hụ laptọọpụ niile nwere Ryzen 7
Na-achọ laptọọpụ nwere Ryzen 5? Chọpụta ụdị ndị a na-ere taa na nke kacha mma ụdị laptọọpụ Ryzen 5
Ịchọrọ laptọọpụ Ryzen 7 dị ike na ọnụahịa kacha mma? Chọpụta ụdị ndị a na-enye site na ụdị kacha mma. Laptọọpụ ọhụrụ gị dị ebe a
Ọ bụrụ na ị na-achọ laptọọpụ i9 maka egwuregwu ma ọ bụ ọrụ na-achọsi ike, ị gaghị ahụ ihe ọ bụla dị ike karị. Chọpụta onyinye ndị a na ihe ị ga-ekiri
Ị na-achọ laptọọpụ dị ọnụ ala nwere i3? Agbagharala nhọrọ nke onyinye a nwere ụdị laptọọpụ i3 kacha mma
Ị na-achọ laptọọpụ nwere i7? Agbagharala nhọrọ nke onyinye a nwere ụdị laptọọpụ i7 kacha mma maka ihe na-achọsi ike
Ị na-achọ laptọọpụ nwere i5? Chọpụta ụdị ndị nwere ọgbọ ọhụrụ nke ndị nrụpụta Intel ndị a na ọnụahịa kacha mma. Kedu nke ị ga-ahọrọ?